Stellar Phoenix PDF Recovery 1.0.0.0 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... PDF ဖိုင်လေးတွေ မှားဖျက်မိတာတွေ error တက်ပြီး ဖွင့်မရတာတွေကို ပြင်ဆင်ရှာဖွေပေးမယ့် Stellar Phoenix PDF Recovery 1.0.0.0 လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... PDF ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူဆွဲထုပ်နိုင်ခြင်း မိမိသိမ်းဆည်းထားတဲ့ PDF လေးတွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်အောင် Keygen ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
The software supports repairing corrupt/damaged PDF files saves in external storage media, such as CD ROM’s and Flash Memory devices.
Not only you can recover your corrupt PDF files through this PDF recovery software but you can also extract images, remove restrictions from your PDF document. Mentioned below are some key features of this powerful PDF recovery tool.
PDF Converter Recover software Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook